Fanahiana herisetra ara-nofo :: Mpianatry ny lisea bevohoka nitaraina ho naolan’ny zandary iray • AoRaha
Nosamborina sy voatazona ao amin’ny tobin’ny Zandarimaria, any Antsirabe, ny zandary iray voarohirohy ho nanolana mpianatry ny lisea tsy miankina iray any Manandona. Teny an-dalana ho any Manandona avy any Ibity io mpianatra bevohoka dimy volana io no nilaza fa naolan’ilay zandary niaro azy rehefa taraiky hariva teny an-dalana izy. Natao, omaly, tany amin’ilay toerana ny famerenana an-tsary ny zava-nisy.
Tamin’ny 29 septambra lasa teo no nitranga ny fanolanana, araka ny voalazan’ny fitoriana napetraky ny rain’ilay mpianatra vavy. “Efa hariva sy nihamaizina ny andro ka nangataka fiarovana tamin’ireo zandary io vehivavy io hanatitra azy any Manandona avy any Ibity. Nentin’ny zandary iray tamin’ny môtô izy. Misy fiampitana rano indroa anefa teny an-dalana ka tsy maintsy midina amin’ilay môtô. Tamin’io fotoana io no nilazan’ilay vehivavy fa nanaovan’ilay zandary ny filan-dratsiny”, hoy ny loharanom-baovao akaiky ny mpanao famotorana.
Tamin’ny 7 oktobra lasa teo no tonga nametraka fitoriana tany amin’ny Fitsarana ny rain’ilay ankizy. Nisy ny taratasy avy amin’ny Fitsarana any Antsirabe manome baiko ireo zandary hanao famotorana. Nosamborina ilay zandary sy nentina notazonina any Antsirabe. Manao famotorana ireo zandary any an-toerana.
Mitondra vohoka dimy volana io mpianatra vavy 17 taona, kilasy faharoa ao amin’ny lisea tsy miankina iray any Manandona ity. Ilay zandary niantoka ny fiambenana azy no voampanga ho nanolana. Ny fivoaran’ny famotorana no ahafantarana ny marina momba ity tranga ity.
Vaky trano :: Tratra ity tovolahy nangalatra tao amin-dry mompera